Gary Neville oo Bruno Fernandes la bar-bardhigay xiddig horey ugu fashilmay Man United kaddib kulankii Wolves – Gool FM
(Manchester) 03 Feb 2020. Halyeeygii hore ee kooxda kubadda cagta Manchester United ee Gary Neville ayaa ka hadlay wax qabadka Bruno Fernandes ee kulankii Wolves, oo ahaa kulankiisii ugu horeeyay ee Red Devills.
Kubad sameeyaha reer Portugal ayaa ugu dambeyn Old Trafford kaga soo biiray Khamiistii kooxda Sporting Lisbon adduun lacageed gaaraya £67.7million, xilli uu ku soo bilowday kullankii Sabtida ee Wolves.
Gary Neville ayaa tilmaamay in qeybta koowad ee dheshii Wolves uu Fernandes soo bandhigay ama uu soo xasuusiyay halyeeyga reer Argantina ee Juan Sebastián Verón.
Juan Sebastian Veron ayaa ku dhibaatooday sidii uu ula qabsan lahaa Man United, islmarkaana waxa uu ka tagay Old Trafford labo xilli ciyaared kaddib markii uu ku soo biiray, isagoo waqtigaas ahaa xiddigii ugu qaalisanaa ee koox Ingariis ah ay la soo wareegto.
Haddaba Gary Neville ayaa u sheegay shabakada “Sky Sports” ee wadanka England:
“Waxa uu sameeyay waa Ok, wuxuu ahaa kullan aad ugu adag isaga, waxaan u maleeyay run ahaantii inuu si fiican ula qabsaday qeybtii labaad”.
“Waxaan maqalnay in badan oo ka mid ah caawinaadiisa, goolashiisa iyo sida uu sameyn ugu lahaa garoonka dhexdiisa”.
“Qeybta koowad ee kulanka doorkii uu ka ciyaarayay ee No.10 wuxuu isoo xasuusiyay waxa uu qaban jiray Juan Sebastian Veron markii uu yimid Man United”.
“Xaqiiqdii waan jeclaaday isaga waxbadan qeybta labaad markii uu ku ciyaarayay waxoogaa yar oo koontarool ah. Laakiin waxaan u maleynayaa inay tahay kulan uu aad u fiicnaa”.